Roborock Dya, oo ah midka ugu horumarsan qoyan iyo qalajiyaha faaruqinta gacanta | Wararka Gadget
Roborock Dya, faaruqinta gacanta ee ugu qoyan uguna qallalan
Roborock wuxuu hormuud u ahaa hal -abuurka teknolojiyadda ee qaybta nadiifinta caqliga leh, dhowaan waxaan falanqeynay Roborock S7 sidoo kale adiga saldhigga qashinka, oo hadda waxay beddelaan badeecadaha si ay u hagaajiyaan kuwa hadda jira, iyagoo dhaafaya xitaa dhul halkaas oo xilligan ay summado kale u muuqdeen inay ku badan yihiin.
Roborock wuxuu suuqa madhan ee gacanta ku rogaa Dyad, qaab qoyan oo hufan. Aynu ogaanno astaamaha sheygan cusub ee Roborock.
Tani Roborock Dyad garanaya wasakhda iyadoo la adeegsanayo nidaam nadiifin la -qabsi ah, sidaasna lagu faaruqiyo, xoqidda iyo qallajinta, biyo -raacinta adkaha iyo biyaha wasakhda ku jira 620 ml oo haan ah. Waxay biyo nadiif ah ku daadinaysaa dhulka inta rollers -ku ay ka shaqaynayaan inay wasakhda ka saaraan.
Waxay leedahay laba rollers gadaal oo geesaha sidoo kale laba matoor oo si gooni ah awood u leh inay kiciyaan saddex rollers wadar ahaan, nidaam u gaar ah suuqa.
“Marka laga soo tago xiisaha aan u qabno farsamada, Roborock waxaan ku qeexnaa tan
xiisaha hal -abuurka farsamada. Sidaa darteed, Dyad sidoo kale waa badeecad horseed ah
qaybteeda. Waad ku mahadsan tahay nidaamka DyadPower, Dyad waa nadiifiyaha kaliya ee nadiifinta
qoyan oo qallalan oo labadeeda matoor ay si gaar ah u wadaan nidaam dhowr ah
rollers, sidaas darteed bixinta nadiifin wax ku ool ah iyo ka saarida wasakhda a
maray, sidoo kale dhinacyadii. Waxaan abuurnay badeecadan dhinacyo badan leh oo ah
awood u leh inay ka soo saaraan biyaha wasakhda ah si ay u wasakheeyaan, iyagoo isticmaalaya a
nidaamka nadiifinta hal -abuurka leh - Richard Chang, Maamulaha Roborock.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a nidaamka is-nadiifinta otomaatiga ah ee riixitaanka badhanka, oo ay weheliso muujinta LED taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan aqoonsanno aagagga sagxadda ee xoogga saara wasakhda ugu badan, oo ay weheliso nidaamka digniinta codka oo hore loogu dhex daray alaabtii kale ee Roborock. Sidaas oo kale, Batarigiisa 5000 mAh wuxuu u oggolaan doonaa 35 daqiiqo nadiifin aan kala go 'lahayn ama ilaa 280 mitir oo laba jibbaaran.
Roborck Dyad wuxuu diyaar u ahaan doonaa Yurub 11ka Nofembar qiimaha la soo jeediyay ee ah € 449 ee xarumaha waaweyn sida AliExpress.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Roborock Dya, faaruqinta gacanta ee ugu qoyan uguna qallalan
Philips Momentum 278M1R, falanqayn qoto dheer